Real Madrid oo ku guulaysatay Koobka kooxaha - BBC Somali
Real Madrid oo ku guulaysatay Koobka kooxaha
21 Disembar 2014
Image caption Ciyaartoyda Real Madrid oo kor u haya koobka kooxaha adduunka ee ay ku guulaysteen
Real Madrid ayaa ku guulaysatay koobkii afraad ee sanadkan 2014-ka, kaddib markii ay ka badisay kooxda San Lorenzo ee waddanka Argentina oo matalaysay Laatiin Ameerika, kama dambeysta koobka Adduunka ee Kooxaha, ee lagu qabtay waddanka Morocco.
Kooxda ayaa horay sanadkan ugu guulaysatay Koobka Horyaalada Yurub, Koobka Copa del Rey iyo koobka Super Cup-ka ee lagu daah furo ciyaaraha Horyaalada Yurub.
Sergio Ramos ayaa goolka koobaad madaxa ugu dhaliyay kooxdiisa.
Goolka kalana waxa uu ku yimid khalad uu galay golhayaha kooxda San Lorenzo, khaladkaasi oo uu ka faa’iidaystay Gareth Bale, goolna uu u badelay.
Real Madrid ayaanan la hakin muddo dheer waxa ayna sii dheeraysay rikoorkii ay u dhigtay Spain iyadoo haatan badisay 22 kulan oo isku xiga oo ah guud ahaan ciyaarihii ay dheeshay.
Kooxdan ayaa koobkan horay ugu guulaysatay saddex jeer oo hore, markaasi oo koobkan loo yaqaanay the Intercontinental Cup.
Tababaraha Real Madrid, Carlo Ancelotti, ayaa daaha ka qaaday inuu doonayo inuu gacanta ku soo dhigo koob kale kaddib markii uu garoonka soo wada galiyay ciyaaryahanada Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, James Rodriguez iyo Karim Benzema.
Xilli sii horreyayna kooxda Auckland City oo ka socotay waddanka New Zealand ayaa ku guulaysatay kaalinta saddexaad kaddib markii ay gool ku laad kaga adkaatay kooxda Cruz Azul ee waddanka Mexico, ciyaarta labada kooxood ayaa ku soo dhamaatay 1-1.